Qofkeenu waa: Martin Vrijland
Filed in YAA KU DHACAY	by Martin Vrijland	on 2 April 2015	• 6 Comments
Su'aalaha ugu muhiimsan ee qofku weydiin karo waa: "Yaan ahay?". Dabcan waxaa jira su'aalo kale oo naga sii mashquulsan, sida "Waa maxay macnaha nolosha? Halkee ayuu ka yimaadaa? Ma jiraa Ilaah? "Sidoo kale. Haa, taasi waa meeshii aan ugu dambeyntii doonayay wax macno leh [...]
Guud ahaan Wadarta: 1.328.896
Marcos op Coronavirus: halkee fayraska ka yimaadaa sidee bay u tarmaan uguna dhaqaaqaan?
guppy op Habka ugu waxtarka badan ee lagula dagaallamo coronavirus-ka wuxuu ka yimaadaa Shiinaha (fiidiyow)
Mindsupply op 'Fashilka cabal' waa wax aan micno lahayn oo waa kuma 'Q Anon' Inoffizieller Mitarbeiter (IMB'ers)?
Future op Habka ugu waxtarka badan ee lagula dagaallamo coronavirus-ka wuxuu ka yimaadaa Shiinaha (fiidiyow)